မြိုးစကျပှားကနျြးမာရေး နှငျ့ အမေးမြားဆုံး မေးခှနျးမြား - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မြိုးစကျပှားကနျြးမာရေး နှငျ့ အမေးမြားဆုံး မေးခှနျးမြား
လိငျကိစ်စ လိငျမှုဆကျဆံခွငျးဟာ လူရယျလို့ ဖွဈလာရငျ မရှောငျလှဲနိုငျတဲ့ကိစ်စပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့နိုငျငံလိုမြိုးမှာ လိငျအသိပညာပေးရေးဟာ အလှနျအားနညျးတာကွောငျ့ မမေးရဲ မပွောရဲရာကနေ မဖွဈသငျ့သညျမြား ဖွဈပှားခွငျး ရောဂါ ကူးစကျခွငျး မလိုလားအပျသော ကိုယျဝနျရခွငျး အစရှိသညျ့ ပွသနာမြား ကွုံတှလေ့ာရပါတယျ ။ ဒီ့အတှကျ လိငျကိစ်စနှငျ့ပတျသတျပွီး မေးလရှေိ့သညျ့ မေးခှနျးမြားကို ဖွပေေးလိုကျရပါတယျ ။
>နမျးရှုံ့ခွငျးကနေ လိငျရောဂါတှကေူးစကျနိုငျပါသလား ?
ရယေုနျရောဂါမြိုးမှအပ တခွားလိငျရောဂါတှဟော ကူးစကျလမေ့ရှိပါ ။ ရယေုနျရောဂါကို ပါးစပျ နှုတျခမျး တဝိုကျတှငျ အတာပေါကျနခြေိနျ နမျးရှုံ့မိခွငျးဖွငျ့သာ ကူးစကျနိုငျပါတယျ ။
>ကှနျဒုံဝယျယူဖို့အတှကျ ဆေးရုံ ဆေးခနျး ထောကျခံခကျြလိုပါသလား ?
ကှနျဒုံဆောငျထားခွငျးဟာ မိဘမြား အုပျထိနျးသူမြား မနှဈမွို့စရာဖွဈသျောလညျး ကှနျဒုံသညျ မရညျရှယျဘဲ ရလာနိုငျသော ကိုယျဝနျမြား လိငျရောဂါမြားကို ကာကှယျနိုငျပါတယျ ။
>ပါးစပျနဲ့ လိငျဆကျဆံတဲ့အခါ အကာအကှယျလိုပါသလား ?
ပါးစပျကနတေဆငျ့ လိငျရောဂါမြားဟာ ကူးစကျနိုငျခနြေညျးပါးသျောလညျး ကူးစကျနိုငျခွရှေိပါတယျ ။ လိငျအင်ျဂါမှ ထှကျရှိသော အရညျမြားတှငျ ရောဂါပိုးသနျးနှငျ့ခြီပါလရှေိ့ပွီး ပါးစပျအတှငျးမှ တဆငျ့ ရောဂါပိုးမြား ပြံ့နှံ့နိုငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ပါးစပျနဲ့လိငျဆကျဆံရာတှငျလညျး ကှနျဒုံသုံးရနျ လိုအပျပါတယျ ။
> ကှနျဒုံသုံးတာနဲ့ မသုံးတာ လိငျဆကျဆံရာမှာ ကှဲပွားပါသလား ?
လူအမြားစုကို မေးကွညျ့လြှငျ ကှာခွားသညျဟူသော အဖွကေို ပုံစံအမြိုးမြိုးဖွငျ့ ဖွကွေမညျကို တှရေ့သလို တခြို့သူမြားတှငျ ပိုမို အဆငျပွသေညျဟုဆိုသညျ့ အဖွကေိုရလိမျ့မညျ ။
တခြို့သူမြားတှငျ ကှနျဒုံသုံးခွငျးကွောငျ့ ကိုယျဝနျရနိုငျမညျ့ အန်တရာယျမြား လိငျရောဂါ အန်တရာယျမြား စိုးရိမျရနျ မရှိသညျ့အတှကျ အဆငျပွကွေသလို တခြိူ့သူမြားတှငျ ကှနျဒုံအမြိုးအစားအလိုကျ ထိတှမှေု့ကှာခွားခွငျးကွောငျ့ ကှနျဒုံစှပျခွငျးကို နှဈသကျသူမြားလဲရှိသညျ ။
ထို့အတှကျ မညျသို့ပငျခံစားရစကောမူ ကှနျဒုံသုံးခွငျးသညျသာလြှငျ လိငျရောဂါမြားကူးစကျခွငျးကို တားမွဈနိုငျသညျ ။
>တားဆေးသောကျတာ ဝလာတတျလား ?
ဒါဟာ လှဲမှားနတေဲ့ ယုံတမျးတဈခုသကျသကျပဲဖွဈပါတယျ ။
>အတူပှဖေ့ကျနမျးရှုပျခွငျး လကျဖွငျ့ အာသာဖွပေေးခွငျးက ကိုယျဝနျရနိုငျပါသလား ?
ကိုယျဝနျရစရေနျအတှကျ ယောကျြားမှ ထှကျသော သုတျရညျတှငျပါသညျ့ သုတျပိုးကောငျနှငျ့ မိနျးမကိုယျအတှငျးရှိ မမြိုးဥ ပေါငျးစပျရနျလိုအပျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ သုတျရညျဟာ မိနျးမအင်ျဂါအတှငျးဝငျမှသာ ကိုယျဝနျရနိုငျပါတယျ ။ ပါးစပျဖွငျ့ လိငျဆကျဆံခွငျးမှလဲ ကိုယျဝနျမရနိုငျပါ ။
> အကာအကှယျမသုံးမိပဲ လိငျဆကျဆံမိပါတယျ အဲ့အတှငျ အရေးပျေါသန်ဓသေားဆေး ဆိုတာ ဘယျလိုမြားပါလဲ ?
အရေးပျေါသန်ဓသေားဆေးဆိုသညျမှာ ရိုးရိုးလစဉျသောကျရတဲ့ သန်ဓသေားဆေးကို ဆေးပမာဏမြားမြားပါဝငျနခွေငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ နာမညျအမြိုးမြိုးချေါကွပွီး အီးဇီးတူးလို့ အသိမြားပါတယျ ။ အကာအကှယျမဲ့ လိငျဆကျဆံပွီးခြိနျ ဒါမှမဟုတျ ကှနျဒုံပေါကျပွဲသှားခြိနျ ဖွဈလာတဲ့အခါ ကိုယျဝနျမရအောငျတားဆီးပေးနိုငျပါတယျ ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမရှိပါ
၁။ အရေးပျေါသာ သုံးရပါမယျ ပုံမှနျအသုံးပွုနပေါက ကိုယျဝနျတားဆေးမြားကဲ့သို့မဟုတျသညျ့အတှကျ တားဆီးနိုငျခွနေညျးပါးလာသလို မူမမှနျသော သန်ဓတေညျခွငျးမြားဖွဈပှားနိုငျပါတယျ
၂။ လိငျရောဂါမြား မတားဆီးပေးနိုငျပါ
ဒီလောကျဆို လှဲမှားသော အယူအဆအခြို့အတှကျ အဖွကေို ရရှိမယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျ ။
မျိုးစက်ပွားကျန်းမာရေး နှင့် အမေးများဆုံး မေးခွန်းများ
လိင်ကိစ္စ လိင်မှုဆက်ဆံခြင်းဟာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် မရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ကိစ္စပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာ လိင်အသိပညာပေးရေးဟာ အလွန်အားနည်းတာကြောင့် မမေးရဲ မပြောရဲရာကနေ မဖြစ်သင့်သည်များ ဖြစ်ပွားခြင်း ရောဂါ ကူးစက်ခြင်း မလိုလားအပ်သော ကိုယ်ဝန်ရခြင်း အစရှိသည့် ပြသနာများ ကြုံတွေ့လာရပါတယ် ။ ဒီ့အတွက် လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး မေးလေ့ရှိသည့် မေးခွန်းများကို ဖြေပေးလိုက်ရပါတယ် ။
>နမ်းရှုံ့ခြင်းကနေ လိင်ရောဂါတွေကူးစက်နိုင်ပါသလား ?
ရေယုန်ရောဂါမျိုးမှအပ တခြားလိင်ရောဂါတွေဟာ ကူးစက်လေ့မရှိပါ ။ ရေယုန်ရောဂါကို ပါးစပ် နှုတ်ခမ်း တဝိုက်တွင် အတာပေါက်နေချိန် နမ်းရှုံ့မိခြင်းဖြင့်သာ ကူးစက်နိုင်ပါတယ် ။
>ကွန်ဒုံဝယ်ယူဖို့အတွက် ဆေးရုံ ဆေးခန်း ထောက်ခံချက်လိုပါသလား ?
ကွန်ဒုံဆောင်ထားခြင်းဟာ မိဘများ အုပ်ထိန်းသူများ မနှစ်မြို့စရာဖြစ်သော်လည်း ကွန်ဒုံသည် မရည်ရွယ်ဘဲ ရလာနိုင်သော ကိုယ်ဝန်များ လိင်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။
>ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အကာအကွယ်လိုပါသလား ?
ပါးစပ်ကနေတဆင့် လိင်ရောဂါများဟာ ကူးစက်နိုင်ချေနည်းပါးသော်လည်း ကူးစက်နိုင်ခြေရှိပါတယ် ။ လိင်အင်္ဂါမှ ထွက်ရှိသော အရည်များတွင် ရောဂါပိုးသန်းနှင့်ချီပါလေ့ရှိပြီး ပါးစပ်အတွင်းမှ တဆင့် ရောဂါပိုးများ ပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံရာတွင်လည်း ကွန်ဒုံသုံးရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
> ကွန်ဒုံသုံးတာနဲ့ မသုံးတာ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ကွဲပြားပါသလား ?
လူအများစုကို မေးကြည့်လျှင် ကွာခြားသည်ဟူသော အဖြေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြေကြမည်ကို တွေ့ရသလို တချို့သူများတွင် ပိုမို အဆင်ပြေသည်ဟုဆိုသည့် အဖြေကိုရလိမ့်မည် ။
တချို့သူများတွင် ကွန်ဒုံသုံးခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မည့် အန္တရာယ်များ လိင်ရောဂါ အန္တရာယ်များ စိုးရိမ်ရန် မရှိသည့်အတွက် အဆင်ပြေကြသလို တချိူ့သူများတွင် ကွန်ဒုံအမျိုးအစားအလိုက် ထိတွေ့မှုကွာခြားခြင်းကြောင့် ကွန်ဒုံစွပ်ခြင်းကို နှစ်သက်သူများလဲရှိသည် ။
ထို့အတွက် မည်သို့ပင်ခံစားရစေကာမူ ကွန်ဒုံသုံးခြင်းသည်သာလျှင် လိင်ရောဂါများကူးစက်ခြင်းကို တားမြစ်နိုင်သည် ။
>တားဆေးသောက်တာ ဝလာတတ်လား ?
ဒါဟာ လွဲမှားနေတဲ့ ယုံတမ်းတစ်ခုသက်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
>အတူပွေ့ဖက်နမ်းရှုပ်ခြင်း လက်ဖြင့် အာသာဖြေပေးခြင်းက ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား ?
ကိုယ်ဝန်ရစေရန်အတွက် ယောက်ျားမှ ထွက်သော သုတ်ရည်တွင်ပါသည့် သုတ်ပိုးကောင်နှင့် မိန်းမကိုယ်အတွင်းရှိ မမျိုးဥ ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သုတ်ရည်ဟာ မိန်းမအင်္ဂါအတွင်းဝင်မှသာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ် ။ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှလဲ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ပါ ။
> အကာအကွယ်မသုံးမိပဲ လိင်ဆက်ဆံမိပါတယ် အဲ့အတွင် အရေးပေါ်သန္ဓေသားဆေး ဆိုတာ ဘယ်လိုများပါလဲ ?
အရေးပေါ်သန္ဓေသားဆေးဆိုသည်မှာ ရိုးရိုးလစဉ်သောက်ရတဲ့ သန္ဓေသားဆေးကို ဆေးပမာဏများများပါဝင်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နာမည်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပြီး အီးဇီးတူးလို့ အသိများပါတယ် ။ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီးချိန် ဒါမှမဟုတ် ကွန်ဒုံပေါက်ပြဲသွားချိန် ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်မရအောင်တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ် ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ
၁။ အရေးပေါ်သာ သုံးရပါမယ် ပုံမှန်အသုံးပြုနေပါက ကိုယ်ဝန်တားဆေးများကဲ့သို့မဟုတ်သည့်အတွက် တားဆီးနိုင်ခြေနည်းပါးလာသလို မူမမှန်သော သန္ဓေတည်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်
၂။ လိင်ရောဂါများ မတားဆီးပေးနိုင်ပါ
ဒီလောက်ဆို လွဲမှားသော အယူအဆအချို့အတွက် အဖြေကို ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ။
Effects of sedentary lifestyle on pregnancy